Harry Keane oo ka hadlay haddii uu diyaar u yahay kulanka finalka Champions League – Gool FM
(London) 27 Maajo 2019. Harry Kane ayaa maanta shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu ka qeyb galo kulanka finalka Champions League ay kula ciyaari doonaan Liverpool sabtida magaalada Madrid ee caasimada Spain.
Hadalka laacibka reer England ayaa wuxuu imaanayaa, kaddib wareysi uu bixiyay kahor maalmo finalka Champions League ee ka dhici doono garoonka Wanda Metropolitano ee kooxda Atlético Madrid.
Laakiin Harry Kane ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in go’aanka kama dambeysta ah uu ku jiro gacanta macalinka Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino.
Kabtanka Tottenham ayaa ku soo laabtay tababarka kooxda maalmihii lasoo dhaafay, wuxuuna sameeyay jimicsi xoogan si uu uga qeyb galo kulanka finalka Champions League ay la ciyaarayaan Liverpool Sabtida soo aadan.
Hadaba Harry Kane ayaa ka jawaabay su’aal ahayd haddii uu diyaar u yahay finalka Champions League waxaana uu yiri:
“Haa, si wanaagsan ayaan dareemayaa iminka, kooxda ayaan dib ugu soo laabtay waxaan ku gudi jiray tababarka buuxa wax waliba waan sameenay, anigu haatan waxaan joogaa meel”.
“Tababaraha ayaa i qiimeyn doona, wuxuuna go’aansan doonaa haddii aan diyaar ahay iyo haddii kale, laakiin hada wanaag ayaan dareemyaa diyaar ayaana ahay”.
“Hadii finalku maanta yahay diyaar ayaan u noqon lahaa inaan ciyaaro”.
Si kastaba ha ahaatee, Tottenham Hotspur ayaa rajeyneysa inay ku guuleysato Champions League markii ugu horeysay taariikhdooda, halka Liverpool ay raadineyso inay ku guuleysato markeedii lixaad tartankan, kaddib markii ay ku soo guuleysatay 5 jeer ee horey, waxaana markii ugu dambeysay ay ahayd sanadii 2005-tii.
Milkiilaha Man City Sheikh Mansour walaalkiis oo iibsanaya koox ka dheesha horyaalka Premier League